Ungayilungisa Kanjani i-AirPods Case Not Charging? - Izesekeli
Izinkinga zokushaja ezimweni ze-AirPods zivame kakhulu. Ngelinye ilanga uxhuma ukukhokhiswa kwe-AirPods yakho, ne-BAM! Akukhokhiswa.Ngemuva kwalokho uqhubeke uyizame kabili noma kathathu kepha cha, akukho. Njengoba lawa macala e-AirPods mancane kakhulu futhi abonakala enobuchwepheshe ngoba awufuni ukuwalimaza, izizathu zalezi zinkinga isikhathi esiningi zisisekelo futhi ziyisixazululo, kulula.
Ngakho-ke ungalahli ithemba nge $ 160 yakho esivele ikhona, ngoba izingqinamba zokushaja amacala e-AirPods zingaxazululwa nguwe. Noma ngabe kuyini, sikufake konke ukukhathazeka okuyisisekelo kanye nesixazululo sabo lapha, ngakho-ke hamba ohlwini bese usibonga ngokuhamba kwesikhathi.
Ufuna Ukwazi Yikuphi Ama-AirPod Ahamba Phambili? Hlola I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2 ukuqhathanisa.
Ungayilungisa Kanjani Inkinga Ye-Airpods Engakhokhisi?
1. Sula i-lint esakhiweni sokushaja
Ngokuvamile sithwala udaba lwethu silufaka emaphaketheni noma ezikhwameni zethu futhi imicu yendwangu encane noma into ekhona ezansi emaphaketheni iqoqelwa endaweni yokushaja yecala noma ezungeze indlela bese sakha ukuvinjelwa kwesixhumi se-USB.
Ungasusa kalula izinhlayiya usebenzisa ibhulashi lamazinyo elithambile noma noma iyiphi ibhulashi. Vele ungasebenzisi noma yiluphi uhlobo lwento eyinsimbi ukuhlanza indawo.
2. Sebenzisa indwangu ethambile ukukhipha noma yiluphi uthuli
Noma ungaboni intambo noma indwangu ezintanjeni ze-AirPods yakho yokushaja, kusenamathuba ezinhlayiya ezincane zokungcola ezikhona lapho.
Ngakho-ke hlanza indawo yokushaja ngokucophelela ngendwangu yelineni elithambile noma indwangu ye-microfiber noma i-Q-tip, kodwa ungasebenzisi noma iyiphi indwangu emanzi ukuhlanza. Qiniseka ukuthi awugcini ngokulimaza indawo yokushaja.
3. Setha kabusha ikesi lakho le-AirPods
Olunye udaba oluyisisekelo kakhulu lungaba maqondana nesiphazamiso esincane ku-software esingadala iphutha eliqhubekayo. Manje kufanele usethe kabusha ikesi lakho le-AirPods.Uma kwenzeka ungazi ukuthi ungasetha kanjani kabusha ikesi le-AirPods, kulula- mane ucindezele bese ubamba inkinobho yokusetha ekhona ngemuva kwecala amasekhondi ayishumi nanhlanu kuze kube yilapho ukukhanya okungaphakathi kwecala kuphenduka kusuka kokuluhlaza kuye kokumhlophe kucwayiza kube bomvu.
Lapho ubona ilambu elibomvu, yilapho wazi khona ukuthi ukusetha kabusha kwenziwa.Lesi isinyathelo sokuxazulula inkinga futhi sizosula isiphazamiso sohlelo lokusebenza futhi ngethemba ukuthi sizokwenza ukuthi icala liphinde lixhumeke ekushajeni futhi.
4. Zama kwenye ikhebuli
Ikhebuli oyisebenzisayo ingahle iphazamiseke noma ilimale futhi kungenzeka ukuthi imisa ukwedlula kwamanje.Vele uhlole ikhebula ngokukhanyisa ilambu kuzo zombili izinhlangothi bese ubona ukuthi kukhona yini ukuphuka kwentambo.Noma ikhebula lakho libonakala lihle ngokuphelele ngaphandle, zama enye ikhebuli ngoba ikhebuli nayo ingalimala ngaphakathi.
5. Shaja kusuka kukhebuli eqinisekisiwe ye-MFi kuphela
Uma usebenzisa ikhebula eliyimbumbulu noma lokukopisha bese ushintshela kwikhebula le-apula langempela.Izintambo zomgunyathi ikakhulu zibhekele ukonakalisa impilo yebhethri nokushaja izikhala zamadivayisi.
Kufanele uhlale ukhetha izintambo eziqinisekisiwe ze-MFi (Made For i-phone / iPad / neminye imikhiqizo ye-Apple) yawo wonke amadivayisi wakho we-Apple. I-Apple inika ikhebula lombani lamahhala ngama-AirPods noma ungathenga ikhebuli eqinisekisiwe ye-MFi kusuka e-amazon nayo.
6. Uma uxhume nge-extension
Uma uxhume ishaja ngentambo ethile yokwengeza, mhlawumbe intambo yesandiso izosolwa lapha.Khetha ukushaja ngesokhethi sodonga.
Izandiso zinhle kepha zisetshenziswa okwesikhashana kuphela, futhi lokho kuphela uma zinekhwalithi enhle, eqinisekisiwe, nethembekile. Amasokhethi odonga aqinisekisa ukutholwa okufanele kwishaja.
7. Zama enye isokhethi sodonga futhi
Ngokusobala, uma usuvele ushaja ngesokhethi sodonga, bese uzama kusuka kwesinye isokhethi sodonga nasendlini.Isokhethi langaphambili kungenzeka ukuthi lalibhekene nesifunda esifushane noma yini enjalo.
Khipha ibhethri ku-0% bese uxhuma ishaja
Okwenzekayo ukuthi kwesinye isikhathi ibhethri libhajwa ezingeni elithile lamaphesenti futhi ukulikhiphela ngokuphelele ku-0 kungaxazulula le nkinga eshiwo.Icebo elihle elisebenza ngezikhathi ezilungile ukukhipha ibhethri lecala lakho kuze kube ngu-0% bese uzama ukulishaja futhi. Ungaqapha izinga lebhethri lekesi lakho le-AirPods nge-iPhone yakho.
9. Zama kusuka kwenye i-adaptha
Kwesinye isikhathi i-adaptha oyisebenzisayo kungenzeka ingasebenzi kahle futhi ikhawulele ukunikezwa kwamandla kukhebula. Lokhu kungenzeka kungenxa yesekethe emfushane ku-adaptha noma ngenxa yomonakalo kwezinye izintambo zangaphakathi.Ukungena ngaphakathi komunye umuntu ongamamukela kungashaja ikesi le-AirPods ngokushelela futhi. Futhi, khetha ama-adaptha we-Apple wedivayisi yakho.
Yize lokhu kungumkhuba ovame kakhulu ukushiwo, kwesinye isikhathi kumane kweqe ngokuphelele emqondweni wethu lapho sizama izindlela ezingapheli zokulungisa inkinga yokushaja.
10. Uma kwenzeka kungathinti i-100 ngemuva kwamahora anele futhi
Uma kwenzeka ukuthi icala lakho le-AirPods lingathinti amamaki ayi-100 noma ngabe likhokhisa amahora angama-3-4 khona-ke kungenzeka ukuthi kube yinkinga yesoftware futhi udinga ukuxhumana nabakwa-apula ngokufanayo.
Le nkinga ibhekene nezinye izesekeli eziningi ngezikhathi ezithile futhi njalo lapho i-Apple iza nesibuyekezo ukuyixazulula. Isimo lapha singaba sendabeni efanayo futhi, ngakho-ke kungcono ukuya ngendlela esemthethweni.
11. Zama ukufaka ishaja ngaphakathi nangaphandle izikhathi ezi-5-6
Ungazama futhi ukufaka ikhebula lokushaja ngaphakathi nangaphandle kwesikhala secala le-AirPods noma ikhebula elivela ku-adaptha izikhathi ezingama-4-5 futhi ngenhlanhla liphinde lisebenze futhi, awusoze wazi kahle!
Lawa ngamasu athile ayisisekelo wokuxazulula inkinga yakho yokushaja kwe-AirPods futhi angazanywa kalula ekhaya. Ngakho-ke zizame kuqala ngaphambi kokuchitha imali ngokuthenga icala elisha noma ngokuxhumana nanoma yimuphi uchwepheshe.Kepha, kwesinye isikhathi inkinga ekhona ezimweni ze-AirPods ingaba ngeyobuchwepheshe futhi ingadinga ukwesekwa ngongoti.Ngakho-ke uma amathiphu ashiwo ngenhla engaphumeleli kunoma yiluphi usizo bese uthinta abakwa-Apple ukuze balungise kahle noma iyiphi inkinga engaba yinkinga yokushaja noma ukushaja okufanele kwecala lakho le-AirPods.
Ungayibona Kanjani i-Fake AirPods Pro?
Ungasithola Kanjani I-CBS All Access Student Discount?
Ingabe i-MangaStream Down? Ezinye izindlela ezihamba phambili (2020)
ungayilungisa kanjani i-apula logo inamathele
bukela ama-movie wamahhala akukho okulandwayo
ungayithola kanjani ikhodi yomdlalo kusuka ku-amazon
izingosi zokusakaza ama-movie azikho ukubhalisa
indlela yokwenza izingubo ze-roblox
indawo engcono kakhulu yokusakaza ama-movie